Social Welfare – Mahabodhi Parahita
Archive for the Social Welfare category
SELF HELP GROUP (SHG) FOR RURAL DEVELOPMENT
Social Welfare | Tuesday, February 23, 2016 at 11:47 pm
India attained one billion population on 11th May, 2000. 60 % of its population living in rural areas are below poverty level (BPL). One of the greatest problems for government of India is that there are too many jobless people in the country. It is impossible for the government to Read more >>>
ကျေးလက်ဒေသနှင့် အမျိုးသမီးများ တိုးတက်သာယာရေး
Social Welfare | Tuesday, February 23, 2016 at 11:00 pm
အမျိုးသမီးများ ခေတ်နှင့်တပြေးအညီ တိုးတက်ရေးသည် လူဘောင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက အရေးကြီးသည့် အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗောဓိသုခပရဟိတကျောင်းတိုက်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ တိုးတက်သာယာရေးအစီအစဉ်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ အကောင်အထည် ဖော်လျက် ရှိရာ ယခုအခါ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် ၄၀၀၀ ကျော်ထိ ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ၄င်းအမျိုးသမီးများ ၀င်ငွေကျောင်းပြီး တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သားသမီးများအား အလုပ်ခွင်သို့ မစေလွှတ်ရတော့ပဲ ကျောင်းသို့ အချိန်မှန်ပို့လာနိုင်သည်။ နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်လာလျှင်လည်း ဆေးရုံဆေးခန်းတို့သို့ လျှင်မြန်စွာပို့ဆောင်ကာ ဆေးဝါးကုသလာနိုင်သည်။
နှစ်သစ်ကို လူသစ်က စိတ်သစ်ဖြင့်သာ ကြိုနိုင်
Social Welfare | Wednesday, April 16, 2014 at 1:38 pm
နှစ်ဟောင်း ကုန်ဆုံး၍ နှစ်သစ်သို့ တက်လှမ်း ပြောင်းလဲခြင်းကိုပင် သင်္ကြန္တ၊ (=သင်္ကြန်)ဟု ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။သူရိယသိဒ္ဓန္တခေါ် ပက္ခဒိန်စံနစ်အရ -Solar year ဟုခေါ်ရမည့် တနှစ်စီတွင် ကမ္ဘာက နေကို ပတ်လှည့်ရာတွင် - တပတ်စေ့မြောက်၍၊ နောက်တကြိမ် အပတ်သစ်စတင်လိုက်ချိန်သည် စင်စစ် မျက်စိတမှိတ် လျှပ်တပြက်၏ အပုံတထောင်ပုံ တပုံအတွင်းခန့်သာ ကြာမြင့်သည်။ ထိုခဏငယ်ကိုပင် သင်င်္ကြန်မင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းအဖြစ်လည်းကောင်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ပြီး-သင်္ကြန်ယဉ်ကျေးမှုကို လူမျိုးတိုင်း၊ တိုင်းပြည်တိုင်းတွင် တနည်းမဟုတ် တနည်း၊ သူ့ပက္ခဒိန်နှင့် သူကျင်းပကြသည်။ မြန်မာ၊ ရခိုင်တို့၏ အတာရိုးရာ ရေသဘင် သင်္ကြန်ပွဲတော်သည်ပင် သူတို့တွေ အလုပ်-သွားလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ထောင့်အသီးသီးသို့ (ယောင်နောက် ဆံထုံးပါဆိုသလို) ခြေဆန့်ခဲသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တွေနှင့်ပင် ချီခဲ့ပါပြီ။ ပြည်တွင်းမှာ Read more >>>
ရှေးမူမပျက် ပြန်လည်တည်ဆောက်မည့် ဘာမီးယန် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ကြီးများရဲ့ အနာဂါတ်ကြမ္မာ
Social Welfare | Monday, April 14, 2014 at 1:44 pm
သည်ဓါတ်ပုံတွေကတော့ - အာဖဂနစ္စတန် တောပိုင်းမြင်ကွင်းတွေ၊ ပြီးတော့ တာလီဘန်တွေရဲ့ ဘာသာရေးအယူသည်းမှု၊ ဘာသာရေးအရ ဆတ်ဆတ်ထိမခံမှုတွေရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ အာဖဂန်ရဲ့ ဘာမီးယန်ဒေသက (၂၀၀၀ ပြည့်၊ ဇန္န၀ါရီမှာ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့) ဧရာမ ရှေးဟောင်း ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ကြီး နှစ်ဆူ ကိန်းဝပ်တော်မူခဲ့တဲ့ ကျောက်တောင်ခေါင်းကြီး တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလို ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာဟာ အခုဆိုရင် (၁၃) နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးတော်ကြီးတွေရဲ့ အနာဂါတ်ကြမ္မာ ဘယ်လိုနေဦးမလည်း၊ အခုအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေ၊ မရေမရာ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ရမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ Read more >>>